Ukuqhuba udliwano-ndlebe kumabali eendaba kubaluleke kakhulu kunoma yiphina intatheli . " Umthombo " - nabani na ophandabuli-ndlebe-bangabonelela ngezinto ezibalulekileyo kunaliphi ibali leendaba:
imbono kunye nomxholo ngesihloko esixoxwe ngaso
izimvo malunga nendlela yokufikelela ibali
Amagama abanye abantu abadliwano-ndlebe
Izinto oza kuzifuna
Incwadi yecala lokubhaliweyo ye-reporter (ingathengwa kwiindawo ezininzi zokugcina iofisi)
iipenki eziliqela kunye neepensile ukuba kubusika
i-tape irekhodi okanye i-digital voice recorder (ngokuzikhethela)
ikhamera yevidiyo yezonodliwano-ndlebe oceba ukuyifaka kwiwebhu
Uphando - Yenza uphando oluninzi ngangokunokwenzeka. Ukuba uthetha udliwano-ndlebe, tshela, i-cardiologist malunga nokuhlaselwa kwentliziyo, funda kwaye uqinisekise ukuba uyaqonda imiqathango enjengokuthi "ukuboshwa komzimba." Intatheli elungiselelwe kakuhle ikhuthaza ukuzithemba kumthombo .
Ukuphuhlisa Imibuzo - Emva kokuba uphando ngokucokisekileyo isihloko sakho, lungisa uluhlu lwemibuzo ofuna ukuyicela . Oku kuya kunceda ukhumbule onke amanqaku ofuna ukuwafihla.
Iimpawu zoNxibelelwano oluphumelelayo
Misela iNgxelo- Xa uqala, ungangenisi ngokukhawuleza kwimibandela yakho. EChitchat encinci yokuqala. Ukuncoma umthombo wakho kwiofisi yakhe, okanye ubeke izimvo kwimozulu. Oku kwenza ukuba umthombo wakho ube lula.
Yigcine iyimvelo - Udliwano-ndlebe unokungonwabi, ngoko gcina izinto zendalo. Esikhundleni sokufunda ngokuzenzekelayo uluhlu lwakho lwemibuzo, bhala imibuzo yakho ngokwemvelo ekuphumeni kwengxoxo. Kwakhona, gcinana noqhagamshelwano lwamehlo kangangoko kunokwenzeka. Akukho nto engabonakaliyo kumthombo kunokuba intatheli engabonanga phezulu kwincwadi yakhe.
Vula - Musa ukugxininisa ekugqibeleni uluhlu lwakho lwemibuzo ephosakeleyo into enomdla.Kuba umzekelo, ukuba uthendulana ne-cardiologists kwaye uthetha uphando olutsha lwezempilo lwentliziyo oluphuma, cela malunga nalo. Oku kungathatha udliwano-ndlebe lwakho kwimeko engalindelanga-kodwa i-newsworthy-direction.
Gcina Ulawulo - Vula, kodwa ungalichitha ixesha lakho. Ukuba umthombo wakho uqala ukuxhamla malunga nezinto ezingenasisetyenziswa kuwe, ngokuzithoba-kodwa ngokuqinisekileyo-ukuqhuba ingxoxo kwakhona kwisihloko esikuyo.
Ukugqitywa phezulu - Ekupheliseni udliwano-ndlebe, cela umthombo wakho ukuba kukho nto ebalulekileyo ongazange uyibuze yona. Hlola ngokuphindaphindiweyo intsingiselo yamanqanaba asetyenziswayo ongaqinisekanga ngawo. Njalo ucele ukuba ngaba kukho abanye abantu abacebisa ukuba uthethe nabo.
Inqaku Ngokumalunga nokuqaphela - Ukuqala kweentatheli bahlala bekhululekile xa beqonda ukuba abakwazi ukubhala phantsi yonke into eshiwo kuyo, igama-ngegama. Musa ukusifungela. Abanyathelisi abanolwazi bafunda ukuthatha phantsi izinto abazi ukuba baya kuzisebenzisa, kwaye bazinyamekele abanye. Oku kuthatha usebenze, kodwa uxoxwa ngokuphandabuzwa ngakumbi, kulula ukufumana.
Ukubetha - Ukurekhoda i-intanethi kulungile kwiimeko ezithile, kodwa uhlale ufumana imvume yokwenza njalo.
Imithetho ngokuphathelele ukuthayipha umthombo ingaba nzima. Ngokutsho kwePoynter.org, ukurekhoda iingxoxo zefoni zisemthethweni kuwo onke ama-50. Umthetho we-Federal uvumela ukuba urekhode incoko yefowuni kunye nemvume yomntu oyedwa ochaphazelekayo kwingxoxo-kuthetha ukuba kuphela intatheli efunekayo ukuba uyazi ukuba incoko iyathengiswa.
Nangona kunjalo, ubuncinane ubuncinane bama-12 afuna amaqondo ahlukeneyo kwimvume kulabo abhalwa kwiintliwano-dliwano zefoni, ngoko kukulungele ukujonga imithetho kwilizwe lakho. Kwakhona, iphephandaba lakho okanye i-website ingaba nemithetho yayo malunga nokuthabatha.
Ukuguqula i-interviews kubandakanya ukuphulaphula intetho yongxoxo kunye nokuthayipha malunga nayo yonke into ethethiweyo. Oku kuhle ukuba wenza inqaku elinomhla wokugqibela, njengombali wembali . Kodwa kudla ixesha lokuchitha iindaba . Ngoko ukuba unomxholo oqinileyo, unamathele ekuthathweni kwamagama.
Ekugqibeleni, i-ALWAYS ithatha amanqaku, nangona usebenzisa irekhodi. Wonke umshicileli unabali malunga nexesha abacinga ukuba babhalisana nodliwano-ndlebe, kuphela ukuba babuyele kwigumbi leendaba ukuze bafumane ukuba ibhetri yomatshini sele ifile.
Ubomi Bubufana Nani kwiNdlu YaseRoma YaseRoma?
Umlando we-American History Timeline 1851-1860
I-10 ye-Meg Ryan yamaFilimu aphezulu
8 Iingxoxo malunga nokuguquka kwamanye amazwe
Izixhobo zohambo: Ukuqonda iNkqubo yeHlabathi yeNdawo